Voafaoka ao anatin’izany ny mihazo an’Andohatapenaka akaikin’ny FDC iny izay misy andian-jiolahy tsy latsaky ny valo isan-kariva mivoaka miaraka amin’ny antsy maranitra sy ny sabatra miandry ireo fiara na mpandeha an-tongotra tratry ny fitohanana eny an-toerana. Tsy mitazam-potsiny ny mpitandro ny filaminana manoloana izany ka jiolahy iray teo am-panendahana olona no lavon’ny balan’izy ireo ny faran’ny herinandro teo. Roalahy izy ireo no niaraka raha ny fantatra saingy tafaporitsaka ny iray. Ankoatra izay dia jiolahy miisa efatra mpanendaka nampitondra faisana ireo mponina teny Itaosy sy ny manodidina ihany koa no sarona ny faran’ny herinandro teo. Nisy tamin’izy ireo no tratra teny Ambaniala Itaosy, raha nisy ireo tratra teny Anosimasina, samy teo am-panaovana ny asa ratsiny avokoa. Hetahetan’ny mponina rehetra eny Itaosy ny tokony hanaovan’ny fanjakana ezaka hamongorana ireo mpanao ratsy amin’ny alalan’ny famoronana asa. Saika tsy miasa avokoa mantsy ny ankamaroan’ireo mpanendaka eto amintsika, hany ka tsy matahotra ny mandroba sy mamono olona intsony na dia amin’ny andro antoandro aza.